Na-eche Nche, Setan Chọrọ Iripịa Gị (1 Pita 5:8)
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Mee 2015
GỤỌ NKE Acholi Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Moore Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
Na-eche Nche, Setan Chọrọ Iripịa Gị
“Na-echenụ nche. Onye mmegide unu, bụ́ Ekwensu, na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa.”—1 PITA 5:8.
OLEE OTÚ SETAN SI EGOSI NA YA . . .
dị obi ọjọọ?
1. Kọwaa otú otu mmụọ ozi si ghọọ Setan.
CHEGODỊ banyere mmụọ ozi mbụ nupụụrụ Jehova isi. E nwere mgbe ya na Jehova dị ná mma. Ma, ọ nọkatara chọwa ka ụmụ mmadụ fewe ya. Kama iwepụ echiche ọjọọ ahụ n’obi ya, o chegidere ya ruo mgbe o mehiere. (Jems 1:14, 15) Anyị amaghị ihe ọ na-azabu, ma a na-akpọzi ya Setan. O ‘guzosighị ike n’eziokwu.’ O nupụụrụ Jehova isi ma bụrụ “nna ụgha.”—Jọn 8:44.
2, 3. Gịnị ka okwu ndị a na-egosi banyere onyeisi ndị iro Jehova: “Setan,” “Ekwensu,” “agwọ,” na “dragọn”?
2 Kemgbe Setan nupụchara isi, ọ bụ onyeisi ndị iro Jehova. Ọ bụghịkwa enyi ụmụ mmadụ. Otú Baịbụl si kọwaa Setan gosiri na ọ bụ onye ọjọọ na-enweghị atụ. Setan pụtara “Onye Mmegide,” nke gosiri na ọ na-emegide ọchịchị Jehova. Ọ kpọrọ ya asị, jirikwa ike ya niile na-alụso ya ọgụ. Setan fooro ntutu taa na ya ga-akwatu ọchịchị Jehova.
3 Mkpughe 12:9 kpọrọ Setan Ekwensu, nke pụtara “Onye Nkwutọ.” Aha a na-echetara anyị na Setan kwutọrọ Jehova, kpọọ ya onye ụgha. “Agwọ mbụ ahụ” a kpọrọ ya na-echetara anyị otú Setan si jiri agwọ duhie Iv n’Iden. A kpọkwara ya “dragọn ukwu ahụ.” Ọ na-egosi na Setan bụ onye ọjọọ obi fere azụ, nke chọrọ ịkụghasị nzube Jehova ma bibie ndị na-efe Chineke.
4. Olee ihe anyị ga-atụle n’isiokwu a?
4 O doro anya na ọ bụ Setan kacha agba mbọ ka anyị ghara irubere Chineke isi. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji dọọ anyị aka ná ntị, sị: “Nweenụ uche ziri ezi, na-echenụ nche. Onye mmegide unu, bụ́ Ekwensu, na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa.” (1 Pita 5:8) N’ihi ya, isiokwu a ga-akọwa ihe atọ gbasara Setan mere anyị ji kwesị ịna-eche nche ka onye ọjọọ a na-alụso Jehova na ndị ya ọgụ ghara inweta anyị.
SETAN DỊ IKE
5, 6. (a) Nye ihe atụ ndị gosiri na ndị mmụọ ozi “dị ike nke ukwuu.” (b) Gịnị mere Baịbụl ji kwuo na Setan “nwere ikike ịkpata ọnwụ”?
5 Baịbụl kwuru na ndị mmụọ ozi “dị ike nke ukwuu.” (Ọma 103:20) Ha ma ihe karịa ụmụ mmadụ, kakwa ha ike. Ma, ndị mmụọ ozi na-eji ike ha eme ihe ọma. Dị ka ihe atụ, e nwere mgbe otu mmụọ ozi gburu otu narị puku ndị agha Asiria na iri puku asatọ na puku ise. Ọ garaghị ekwe mmadụ omume. Ọ bụrụgodị ìgwè ndị agha, ọ gaara esiri ha ike. (2 Eze 19:35) E nwekwara mgbe otu mmụọ ozi ji amamihe ya na ike ya kpọpụta ndịozi Jizọs n’ụlọ mkpọrọ. N’agbanyeghị na ndị nche nọ ebe ahụ, ha amaghị mgbe mmụọ ozi ahụ ji mepee ụzọ ndị a kpọchiri akpọchi, kpọpụta ndịozi ahụ ma kpọchie ụzọ ndị ahụ.—Ọrụ 5:18-23.
6 Ndị mmụọ ozi kwesịrị ntụkwasị obi na-eji ike ha eme ihe ọma. Ma, Setan na-eji ike ya arụ arụrụala. O doro anya na Setan na-akpa ike. Baịbụl kpọrọ ya “onye na-achị ụwa a” na “chi nke usoro ihe a.” (Jọn 12:31; 2 Kọr. 4:4) O kwuru na Setan bụ́ Ekwensu “nwere ikike ịkpata ọnwụ.” (Hib. 2:14) Ma, ọ pụtaghị na ọ bụ ya na-egbu onye ọ bụla nwụrụnụ. Gịnịzi ka ọ pụtara? Nke mbụ bụ na ọ bụ Setan mere ka ịkpọ asị na tigbuo zọgbuo ju ebe niile. Nke abụọ abụrụ na ihe kpataara mmadụ niile mmehie na ọnwụ bụ na Iv kwetara ụgha Setan ghaara ya, Adam enupụkwara Chineke isi. (Rom 5:12) N’ihi ya, Setan bụ “ogbu mmadụ” ahụ Jizọs kpọrọ ya. (Jọn 8:44) Ọ bụ onye iro dị ike.
7. Olee otú ndị mmụọ ọjọọ si egosi na ha dị ike?
7 Ọ bụrụ na anyị na-eguzogide Setan, anyị ga na-alụsokwa ndị òtù ya niile ọgụ, ya bụ, ndị na-enupụrụ ọchịchị Chineke isi. Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị mmụọ ozi nupụrụ isi. A na-akpọ ha ndị mmụọ ọjọọ. (Mkpu. 12:3, 4) Ọtụtụ mgbe, ha egosila na ha ka ụmụ mmadụ ike. Ha na-echi ndị mmadụ ọnụ n’ala. (Mat. 8:28-32; Mak 5:1-5) Anyị ekwesịghị ichefu na ndị mmụọ ọjọọ na “onye na-achị” ha dị ike. (Mat. 9:34) Anyị agaghị emerili Setan ma ọ bụrụ na Jehova enyereghị anyị aka.
SETAN DỊ OBI ỌJỌỌ
8. (a) Gịnị ka Setan bu n’obi? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.) (b) Olee ihe ndị ị hụrụla gosiri na ụwa dị obi ọjọọ ka Setan?
8 Pita onyeozi ji Setan tụnyere “ọdụm na-ebigbọ ebigbọ.” Otu akwụkwọ kwuru na okwu Grik e si sụgharịta “na-ebigbọ ebigbọ” na-egosi ‘otú anụ ọhịa agụụ ji si agbọ ụja.’ Ọ dabara adaba n’ihi na Setan bụ onye ọjọọ obi tara mmiri. N’agbanyeghị na ụwa dum adịla n’aka ya, ọ na-achọ inwetakwu ndị ọzọ. (1 Jọn 5:19) Ụwa o nwetarala ejubeghị ya afọ. O yiri onye ezigbo agụụ ji nke tachara ọjị, chọzie iri nri. Mkpa Setan ugbu a bụ ka o nweta ndị fọdụrụ ná ndị e tere mmanụ nakwa ndị enyi ha bụ́ “atụrụ ọzọ.” (Jọn 10:16; Mkpu. 12:17) Setan chọrọ iripịa ndị na-efe Jehova. Mkpagbu ọ na-akpagbu ezi Ndị Kraịst kemgbe oge ndịozi Jizọs na-egosi na ọ dị obi ọjọọ n’eziokwu.
9, 10. (a) Olee otú Setan si gbalịa ime ka nzube Jehova banyere mba Izrel kụọ afọ n’ala? (Nye ihe atụ.) (b) Gịnị mere Setan ji lekwasị mba Izrel anya n’oge ochie? (ch) Olee otú i chere obi na-adị Ekwensu mgbe ọ bula ohu Jehova mere mmehie dị oké njọ?
9 Ka Setan na-agba mbọ ịkụghasị nzube Chineke, e nwere ụzọ ọzọ o si egosi na obi fere ya azụ. Ọdụm agụụ ji anaghị emere anụ o jidere ebere. Ma mgbe ọ na-adọgbubeghị ya ma mgbe ọ dọgbuchara ya, ọ naghị ewute ya. Otú ahụ ka ọ dị Setan. Ọ naghị emere ndị ọ chọrọ iripịa ebere. Dị ka ihe atụ, olee otú i chere obi na-adị Setan mgbe ọ bụla ọ hụrụ na ndị Izrel akwaala iko ma ọ bụ gosi na ha dị anyaukwu? Ị gụọ banyere ihe e mere Zimraị mgbe ọ kwara iko nakwa ihe e mere Gehezaị maka anyaukwu, ị̀ na-ahụ ka Setan na-aṅụrị ọṅụ?—Ọnụ Ọgụ. 25:6-8, 14, 15; 2 Eze 5:20-27.
Setan na-aṅụrị ọṅụ mgbe ọ bụla ohu Jehova mere mmehie (A ga-akọwa ya na paragraf nke 10)
10 N’oge ochie, e nwere ihe mere Setan ji lekwasị mba Izrel anya. Ị manụ na ọ bụ ebe a ga-esi mụta Mesaya, bụ́ onye ga-egwepịa Setan ma gosi na ọ bụ Jehova kwesịrị ịchị ụmụ mmadụ. (Jen. 3:15) Setan achọghị ka ihe gaziere ndị Izrel. N’ihi ya, o mere ihe niile o nwere ike ime ka ha mehie. Echekwala na Setan metaara Devid ebere mgbe ọ kwara iko. Echekwala na o wutere ya mgbe Jehova gwara Mozis na ọ gaghị aba n’Ala Nkwa ahụ. Setan na-aṅụrị ọṅụ mgbe ọ bụla ohu Chineke mere mmehie dị oké njọ. N’eziokwu, ụdị ihe ahụ nwere ike iso n’ihe ndị o ji akwa Jehova emo.—Ilu 27:11.
11. Gịnị mere Setan ji chọọ inweta Sera?
11 Setan kpọrọ ezinụlọ a ga-esi mụta Mesaya asị pụrụ iche. Dị ka ihe atụ, chegodị ihe mere obere oge Chineke gwachara Ebreham na ọ ga-abụ “mba ukwu.” (Jen. 12:1-3) Mgbe Ebreham na Sera nọ n’Ijipt, Fero kpọọrọ Sera laa n’ụlọ ya ma chọọ ka ọ bụrụ nwunye ya. Ma, Jehova chebere Sera ma napụta ya ná nsogbu ahụ. (Gụọ Jenesis 12:14-20.) Ụdị ihe ahụ mekwara na Gira obere oge tupu a mụọ Aịzik. (Jen. 20:1-7) Ọ̀ bụ Setan chọrọ iji Fero na eze Gira nweta Sera? Cheta na Sera hapụrụ obodo Ọọ, bụ́ obodo bara ọgaranya, biwe n’ụlọikwuu. Setan ò chere na ọ ga-eji ọmarịcha obí Fero na nke Abimelek rata ya? Ò chere na Sera ga-ahapụ ma di ya ma Jehova gaa lụwa ndị eze ahụ? Baịbụl agwaghị anyị. Ma, anyị ma na obi gaara adị Ekwensu ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na Sera erughịzi eru ịmụ onye a ga-esi n’agbụrụ ya mụta Mesaya. Ọ garaghịdị ewute Setan ma a sị na o mere ka ezigbo nwaanyị ahụ na di ya tisaa, ya emebie aha ya, ya na Jehova aghara ịdịzi ná mma. N’eziokwu, Setan dị obi ọjọọ.
12, 13. (a) Mgbe a mụchara Jizọs, olee otú Setan si gosi na ya dị obi ọjọọ? (b) Olee otú i chere obi na-adị Setan ma ọ hụ ụmụaka hụrụ Jehova n’anya ma na-agbalịsi ike ịna-efe ya taa?
12 A mụrụ Jizọs ọtụtụ narị afọ ka oge Ebreham gasịrị. Echela na Setan weere ya ka nwa mara mma, pụọ iche, dịkwa mma okuku. Setan ma na nwa ahụ ga-eto, bụrụ Mesaya ahụ e buru n’amụma. Ọ bụ Jizọs bụ isi sekpụ ntị ná mkpụrụ Ebreham. Ọ bụkwa ya ga-emecha “bibie ọrụ Ekwensu.” (1 Jọn 3:8) Obi Setan ọ̀ gwara ya na igbu nwa ọhụrụ bụ arụrụala? N’ebeekwanụ? Ọ chọghịdị ịma ma ihe ọ na-eme ọ̀ bụ ihe ọjọọ. Mgbe Jizọs ka bụ nwatakịrị, Setan gbalịrị igbu ya. Olee ihe Setan mere?
13 Ezigbo iwe were Eze Herọd mgbe ndị na-agụ kpakpando nọ na-ajụ banyere “onye ahụ a mụrụ ịbụ eze ndị Juu.” O kpebisiri ike igbu ya. (Mat. 2:1-3, 13) Ọ bụ ya mere o ji nye iwu ka e gbuo ụmụaka niile bụ́ ndị nwoke na Betlehem nakwa n’obodo ndị gbara ya gburugburu, malite ná ndị gbara afọ abụọ gbadaa. (Gụọ Matiu 2:13-18.) Jizọs esoghị ná ndị e gburu. Ma, gịnị ka ihe a na-eme ka anyị mata banyere onye iro anyị bụ́ Setan? O doro anya na o nweghị ihe Ekwensu ji ndụ ndị mmadụ kpọrọ. Ọ naghịdị emere ụmụaka ebere. N’eziokwu, Setan bụ “ọdụm na-ebigbọ ebigbọ.” Echefula na obi fere ya azụ.
SETAN DỊ AGHỤGHỌ
14, 15. Olee otú Setan si ‘mee ka uche ndị na-ekweghị ekwe kpuo ìsì’?
14 Ebe ọ bụ na Jehova hụrụ ndị mmadụ n’anya, naanị otú Setan nwere ike isi mee ka ha gbakụta ya azụ bụ ịghọgbu ha. (1 Jọn 4:8) Setan na-eduhie ndị mmadụ ka ha ghara ịmata na ha kwesịrị ịgba mbọ ka ha na Chineke dị ná mma. (Mat. 5:3) O sila otú ahụ ‘mee ka uche ndị na-ekweghị ekwe kpuo ìsì, ka ìhè nke ozi ọma ahụ dị ebube banyere Kraịst, onye bụ́ onyinyo Chineke, wee ghara inwukwasị ha.’—2 Kọr. 4:4.
15 Otu n’ime ụzọ kachanụ Setan si eduhie ndị mmadụ bụ okpukpe ụgha. Ọ ma na Jehova “chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa.” (Ọpụ. 20:5) Chegodị ụdị obi ụtọ Setan na-enwe mgbe ọ hụrụ ka ndị mmadụ na-efe ndị nna nna ha, ihe e kere eke, ma ọ bụ anụmanụ, ya bụ, ihe ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ ma e wezụga Jehova. Ọtụtụ ndị chere na otú ha si efe Chineke dị mma, ma ọ dị mwute na ha kweere n’ozizi ụgha, na-emekwa ememme okpukpe ndị na-abaghị uru. Ha yiri ndị Izrel n’oge Aịzaya, bụ́ ndị Jehova sịrị: “Gịnị mere unu ji na-emefu ego maka ihe na-abụghị nri? Gịnịkwa mere unu ji na-adọgbu onwe unu n’ọrụ n’ihe na-adịghị eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma ma rie ihe dị mma, ka nri na-edozi ahụ́ tọọkwa mkpụrụ obi unu ụtọ nke ukwuu.”—Aịza. 55:2.
16, 17. (a) Gịnị mere Jizọs ji sị Pita: “Gaa m n’azụ, Setan”? (b) Olee otú Setan nwere ike isi ghọgbuo anyị ka anyị mewe anya ụra?
16 Setan nwedịrị ike ịghọgbu ndị ji ịnụ ọkụ n’obi na-efe Jehova. Dị ka ihe atụ, chegodị banyere ihe mere mgbe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-egbu ya n’oge na-adịghị anya. O doro anya na Pita hụrụ Jizọs n’anya. Ọ bụ ya mere o ji kpọpụ Jizọs n’akụkụ, sị ya: “Meere onwe gị ebere, Onyenwe anyị; ihe a agaghị eme gị ma ọlị.” Jizọs zara Pita n’ezoghị ọnụ, sị: “Gaa m n’azụ, Setan!” (Mat. 16:22, 23) Gịnị mere Jizọs ji kpọọ Pita “Setan”? Ọ bụ n’ihi na Jizọs ghọtara ihe ga-eme n’oge na-adịghị anya. Oge eruola ka ọ nwụọ iji gbapụta ụmụ mmadụ ma gosi na Ekwensu bụ onye ụgha. Oge ahụ dị ezigbo mkpa ná ndụ ụmụ mmadụ. Ọ bụghị oge Jizọs ‘ga-emere onwe ya ebere.’ Obi gaara atọgbu Setan atọgbu ma a sị na Jizọs mewere anya ụra.
17 Ka ụwa ochie a na-agba egwú ụla, o doro anya na anyị bi n’oge dị ezigbo mkpa. Setan chọrọ ka anyị ‘meere onwe anyị ebere’ ma gbalịsiwe ike ka anyị bụrụ ndị a ma ama n’ụwa ochie a. Ime otú ahụ pụtara na anyị na-eme anya ụra. Ekwela ka ụdị ihe ahụ mee gị. Kama ime otú ahụ, ‘na-eche nche.’ (Mat. 24:42) Ụgha Setan ji aghọgbu ndị mmadụ taa bụ na ọgwụgwụ dị ezigbo anya ma ọ bụ na ọ gaghịdị abịa. Ekwela ka ọ ghọgbuo gị.
18, 19. (a) Olee otú Setan nwere ike isi gbalịa ịghọgbu anyị ma mee ka anyị chee na Jehova agaghị ahụ anyị n’anya? (b) Olee otú Jehova si enyere anyị aka ka anyị mụrụ anya ma na-eche nche?
18 E nwere ụzọ ọzọ Setan si agbalị ịghọgbu anyị. Ọ chọrọ ka anyị chee na o nweghị ihe ga-eme ka Chineke hụ anyị n’anya nakwa na Chineke enweghị ike ịgbaghara mmehie anyị. Ihe a niile bụ ụgha Setan ji aghọgbu ndị mmadụ. A sị ka e kwuwe, ònye ka Jehova na-ekwesịghị ịhụ n’anya? Ọ bụ Setan. Ònye ka Jehova na-agaghị agbaghara? Ọ bụ otu Setan ahụ. Ma, Baịbụl kwere anyị nkwa, sị: “Chineke abụghị onye ajọ omume ichefu ọrụ unu na ịhụnanya unu gosiri maka aha ya.” (Hib. 6:10) Jehova anaghị eji mbọ anyị na-agba ime uche ya egwu egwu. Ozi anyị na-ejere ya abụghị n’efu. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 15:58.) N’ihi ya, ka anyị ghara ikwe ka Setan jiri ụgha ya ghọgbuo anyị.
19 Anyị ahụla na Setan dị ike, dị obi ọjọọ, dịkwa aghụghọ. Olee otú anyị ga-esi merie ụdị onye iro a? Jehova na-enyere anyị aka. Okwu ya bụ́ Baịbụl na-akụziri anyị ụzọ dị iche iche Setan si aghọgbu ndị mmadụ. N’ihi ya, “anyị abụghị ndị na-amaghị atụmatụ ya.” (2 Kọr. 2:11) Ọ bụrụ na anyị amata ụzọ dị iche iche Setan si alụso anyị ọgụ, anyị ga-enwekwu ike ịmụrụ anya ma na-eche nche. Ma, ịmata ụzọ aghụghọ Setan abụghị ebe okwu biri. Baịbụl kwuru, sị: “Na-eguzogidenụ Ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe unu nọ.” (Jems 4:7) Isiokwu na-esonụ ga-eleba anya n’ụzọ atọ anyị nwere ike isi lụso Setan ọgụ ma merie.
AKỤKỌ NDỤ Icheta Ịhụnanya Mbụ M Na-enyere M Aka Ịna-atachi Obi
Ị Ga-alụsoli Setan Ọgụ ma Merie
Ha “Hụrụ” Ihe Ndị E Kwere ná Nkwa
Ṅomie Onye Ahụ Kwere Nkwa Ndụ Ebighị Ebi
FROM OUR ARCHIVES Ọ Hụrụ na Ọ Bụ Ịhụnanya Mere Kafiteria Ahụ Ji Na-aga Siriri Werere
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Mee 2015
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Mee 2015